Posted on May 5, 2020 May 5, 2020 by Npnews
कस्तो अचम्मको नियम ? महिलाले ड्राइभिङ लाइसेन्स पाउन पनि यौ नरोगको परिक्षण गर्नुपर्ने !
एजेन्सी । यौ नरोग नभएका महिलालाई मात्र ड्राइभिङ लाइसेन्स दिने यो अनौठो प्रचलनका बारेमा कहिल्यै सुन्नु भएको छ ? यो रोचक घटना हो युरोपेली देश लिथुआनियाको । युरोपेली देश लिथुआनियामा स्त्री तथा यौ न रोगको डाक्टरसँग चेकअप गराएर मात्र महिलालाई सवारी चालक अनुमत्ी पत्र दिइदै आएको छ ।
उनले मोटिभेसनल स्पिकरको रुपमा विश्व भ्रमण गरेका छन् र घरबारबिहीन जनताको लागि च्यारिटी तथा महिला हिंसाबिरुद्धको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाहरुमा आवद्ध छन् ।
उनले लेखेको आत्मकथा ‘द पर्स्युट अफ हृयाप्पीनेस’ले बेष्ट सेलिङ किताबको मान्यता पाएपछि यसै कितावको आधारमा हलिउड फिल्मका लागि प्रस्ताव आएको थियो । यो चलचित्र सन् २००६ मा रिलिज भएको थियो र चलचित्रमा गार्डनरको चरित्रमा अभिनय गर्ने विल स्मिथ ओस्कारमा उत्कृष्ट अभिनेताको रुपमा मनोनयनमा परेका थिए ।
बरु उनी आमा बेट्टी जिन र शारीरिक रुपमा अशक्त तथा जँड्याहा सौतेनी बाबुसँग गरिवीको चरण पीडाबीच हुर्केका थिए । त्यहाँ उनले केहि समय सरकारी आश्रममा पनि बिताएका थिए । उनकी आमा आफ्ना पार्टनरलाई मार्न खोजेको आरोप लागेपछि बेपत्ता भएकी थिइन्
यहि हुँदाहुँदै पनि गार्डनर आफ्नी आमालाई प्रेरणा मान्छन् । उनी भन्छन्, ‘मसँग पुरानो जमनाको आमा थिइन् । उनी हरेक दिन भन्ने गर्थिन कि छोरा तिमी जे मन लाग्छ त्यो गर, जुन तिम्रो आत्माले स्वीकार गर्छ ।’ ‘र अहिले मैले आमाकै प्रेरणा पछ्याउँदै त्यही गरिरहेको छु र सफल भएको छु ।’
यद्यपि सेयर दलालका लागि हुने अन्तर्वार्ताको एक दिनअघि पार्किङ टिकटको पैसा तिर्न नसकेर उनी जेलमा पुगेका थिए । त्यहाँ उनलाई ब्रिजले सहयोग गरेका थिए । आफ्नो आत्मकथामा बनेको चलचित्र रिलिज भएको ६ बर्षपछि उनलाई अर्को बज्रपात आइपर्‍यो । सन् २०१२ मा क्यान्सरका कारण उनकी पत्नीको मृत्यु भयो ।
युवतीले करोडपती वृद्धसँग विवाह गरिन, ३ महिनापछि थाहा भयो, श्रीमान् त आफ्नै हजुरबुवा पो रहेछ !
एजेन्सी । अमेरिकाकी एक २४ वर्षीया युवतीले ६८ वर्षे श्रीमान् आफ्नै हजुरबुवा भएको थाहा पाएपछि चकित परेकी छिन् ।
‘उनी रेष्टुरेन्टभित्र छिर्ने बित्तिकै मैले उनलाई विवाह गर्ने निर्णय गरिसकेको थिएँ,’ उनले थपे ।
उक्त भेटमा उनीहरुले आफ्नो परिवार बारे निकै संक्षिप्त कुराकानी गरेको बताए । कुराकानीकै क्रममा उनले थाहा पाए कि ती युवतीलाई उनका बुवा (वृद्धका छोरा) ले गर्भवती भएका कारण घर निकाला गरिदिएका थिए । त्यसपछि उनले ती धनी वृद्धासँग विवाह गरेर आफ्नो बाँकीको जिन्दगी उनैसँग बिताउने निर्णय गरेको उनले बताइन् ।
‘मेरो दुईवटा विवाह टुटिसकेको छ । तेस्रो विवाह नटुटोस् भनेर कटिबद्ध छु,’ उनले भने । ‘जब मैले मेरो बुवालाई फोटोमा देखें । म निकै निराश भएँ । यद्यपी, हामीबिचको सम्बन्ध यति गहिरो भइसकेको छ कि यो कुराले हामीलाई छुटाउन सक्दैन,’ ती युवतीले भनिन् ।
उनीहरुबिचको सम्बन्ध स्पष्ट भएपनि उनीहरु सँगै बसिरहेका छन् ।
१६ वर्षीया युवतीलाई सुतिरहेको बेला ब’लात्का’र गर्ने युवक प’क्राउ